Isticmaalka iyo heerarka tayada ee budada aluminium ee hawada ku jira
Waxaa jira kala sooc badan oo ah budada aluminiumka hawada ku jirta. Noocyada kala duwan waxay leeyihiin kala duwanaan sax ah oo kala duwan, isticmaalkooda iyo wax qabadkooduna aad ayey u kala duwan yihiin. Budada aluminiumka ee dufanka leh waa in loo adeegsadaa ujeedooyin gaar ah, sidaa darteed waxay leedahay shuruudo adag oo tayo leh. Waxqabadka ...
Habka shaqada qabow ee soosaarida koollada budada aluminium iyo sida loo kaydiyo
Jinka budada ah ee Aluminiumku waa nooc ka mid ah walxaha kiimikada ceyriin, kaas oo ay si ballaaran u adeegsadeen warshadaha la xiriira oo door weyn ka ciyaaray. Budada Aluminium sidoo kale waxay leedahay shuruudo gaar ah oo ku saabsan geeddi-socodkeeda inta lagu jiro habka wax soo saarka, inta badan iyadoo la adeegsanayo habab farsamaysan iyo shaqo qabow ...
Noocyo kala duwan oo ah aluminium midabbo ah iyo habab alwaax aluminium hababka
Maaddaama ay tahay wax soo saar warshadeed, budada aluminium ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha casriga ah, iyo warshadaha sida qalabka diidmada, alwaaxyada dhoobada ah, iyo metallurgy kiimikada ayaa loo baahan yahay in lagu dabaqo. Farqiga u dhexeeya habka wax soo saarka dartiis, muuqaalka ka hooseeya korantada m ...